Mgbaze, Mgbawa na Meandering mmetụta nke Technology | Martech Zone
Mgbaze, Mgbawa na Meandering mmetụta nke Technology
Enwere mmekorita gabigara ókè na ihe na - eme n'ọtụtụ ụlọ ọrụ - gụnyere akụkọ, nri, egwu, njem, teknụzụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ọzọ na mbara ụwa - otu esi agbanwe ọdịdị ala anyị n'oge oge. Oge ọ na - ewe bụ na - adị mkpụmkpụ karịa ka teknụzụ na - aga ngwa ngwa.
Akụkọ gbanwere ngwa ngwa n'ihi ọsọ nke weebụ yana ikike ikwurịta okwu ngwa ngwa. Ndị na-ege ntị agaghịzị echere ka a kesaa ozi, ha nwere ike gaa ozugbo na isi mmalite iji nweta ozi ziri ezi. Achuputa ndi oru nta akuko ma ndi oru nta akuko dara ada dika ihe omuma na mgbasa ozi weputara na akwukwo ohuru na ntaneti. M ka kwenyere na enwere uru dị ukwuu maka akwụkwọ nta akụkọ - ịnwe mmadụ igwu ala ma nyochaa - n'adịghị ka ndị na-ede blọgụ… mana ha na-agba mbọ ịchọta ụdị kwesịrị ekwesị. Ekwere m na ọ ga-abịa. Ozi nyocha a ka bara uru… naanị na anyị ga-enweta ụlọ ọrụ akụkọ na ụlọ ọrụ clickbait.
Dịka ọmụmaatụ, nri, na-agbanwe elekwasị anya site na imepụta oke ihe na obere mmepụta na nkesa. Enyi m, Chris Baggott, dịka ọmụmaatụ na-etinye nnukwu ego na ụlọ ọrụ a. Teknụzụ dị iche iche na ọrụ ugbo na lọjistik na-eme ka o kwe obere ugbo ịsọ mpi na ụlọ ọrụ buru ibu. Enwere ike ịmepụta nkesa micro site na ichebe ala. Dịka ọmụmaatụ, Chris nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ onye isi ego ya na-azụ ahịa na-ejide ọnụnọ Facebook.
Ọtụtụ mmadụ na-ele ụlọ ọrụ egwu dị ka nke na-anwụ anwụ, mana ọ bụ naanị otu usoro ahụ na-eme na nri. N’egwú, enwere ndị otu na - emepụta igwe n’ere nwere mkpịsị ugodi nke ihe anyị zụtara, otu anyị si zụta ya na ebee. Ugbu a, site na teknụzụ dijitalụ, obere ìgwè nwere ike ịmepụta ma kesaa egwu na-enweghị mkpa maka akara aka. Ọtụtụ saịtị na-apụta nke na-enye ndị agha ohere iwulite ihe na ndị na-ege ntị, wee gaa ịme ihe ngosi ebe ahụ. Mee ya na ngwa ahia erere na ntanetị na onye na-egwu egwu nwere ike ibi ezigbo ndụ. Themụ okorobịa ndị na-anya Bentleys abụghị ndị na-akwado nke a.
Ationgbọ njem na-agbanwekwa. Ngwa ọdịnala emeela ka Uber na Lyft nwee ike ịgbanwe njem, na-enye onye ọ bụla ohere ị nweta ụgbọ ala dị ọcha n'okporo ụzọ iji bulie ndị folda ma dobe ha.
N'uche m, enwere akụkụ nke a nke anyị kwesịrị iburu n'uche na ịzụ ahịa. Ọtụtụ mgbe, enwere a ugwu mgbawa nke oru na ihe ohuru nke na-eme ka ihe omimi ohuru na-adighi. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ. Nnukwu uru bara uru ma ndị dị njikere itinye ihe ize ndụ ahụ nwetara ọtụtụ ego. Ndị na-ere ahịa na-agbanwe n'oge na-agba ịnyịnya gbagoro wee hụ nsonaazụ dị egwu. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ile anya mgbe niile maka ugwu na-esote vol ịbụ onye kuchiri oge mbụ nwere ike ị nweta ụgwọ ọrụ dị egwu.
N'ezie, mgbe ihe gbawara na ọrụ, ọdịdị ala na-agbanwe. Asọmpi na-edozi na ahịa òkè. Nke a bụ mbuze. Dịka ọmụmaatụ, uru tagzi tagzi na-abanye n'ime ego ndị na-anya ụgbọ ala Uber. Ọ dịghị mkpa n'ihi na nnukwu ụlọ ọrụ ụlọ, lọjistik na usoro, odo cabs, redio usoro, mgbanwe njikwa, wdg… ha na-eroded pụọ na ya pụta bụ ezigbo njem na a siri ike uru na-enye ihe ego kwesịrị ịnya ụgbọ maka ọtụtụ.
Mgbe ahụ, na teknụzụ, anyị na-ele anya ime ihe. Dịka ọmụmaatụ - osimiri nke soshal midia jupụtara na ngwa ngwa na-enweghị atụ. E wuru nnukwu ụlọ ọrụ iji nyochaa na bipụta n'ofe osimiri nke Twitter na Facebook. Ma osimiri ahụ amalitela ịkwado ugbu a. Fọdụ ihe ndị na-adịghị mma mere dị ka Google+ na ọtụtụ puku ngwa kụrụ ahịa. Otú ọ dị, afọ iri ka nke ahụ gasịrị, osimiri ahụ na-eto miri emi na usoro, usoro kacha mma, na nyiwe amalitela idozi.
Ọ na-ewe ọtụtụ puku afọ iji hazie ọdịdị ala, mana ọ na-ewe naanị ọtụtụ awa iji hazie teknụzụ. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enweta nkasi obi na ala na-adịghị agbanwe agbanwe nke ha nwere ike iwukwasị ala na enweghị nchegbu banyere ya. N'ikwu eziokwu, ekwenyeghị m na nke ahụ bụ ebe anyị bi ọzọ ma eleghị anya ọ gaghị ebi ọzọ. Ala na-agbanwe n'okpuru anyị na ndị na-ere ahịa ga-adị ngwa iji were uru nke ebbs na eruba. Banye n'oge na-adịghị anya, enwere ike ịsacha gị, mana banyela n'oge na-adịghị anya ị ga-ahapụ iwu ụlọ na ụkọ mmiri.
Ugwu g willkpofu kwa. Ọ bụ ya mere anyị ji ahụ nnukwu ụmụ nwoke na ụlọ ọrụ ndị a niile na-azụta obere ụlọ ọrụ na-agbawa mgbawa na ịnwa ịkwatu mmiri na mmiri na-emebi ihe onwunwe ha. Ha nwere ike ime nke a site na ịchọọ iwu ọhụrụ ma ọ bụ ịkwanye iwu na ndị ọka iwu nwere ikike iji gbochie mmiri. Ha nwere ike iguzogide ya nwa oge - mana n'ikpeazụ ọdịdị ga-emeri.
Tags: mbuzemgbawaime ihe
Igodo isii maka mmemme Nkwalite na Social Media